देशभक्त जनगणतान्त्रिक माेर्चाले विज्ञप्ति जारीगर्दै डा.केसीका जायज माग प्रति समर्थन जनाएको छ
प्रकासित मिति : २३ असार २०७५, शनिबार प्रकासित समय : १६:१०
काठमाडौं असार २३ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको मागलाई वेवास्ता गरी सरकारद्वारा हालै मात्र संसदमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ दर्ता गरिनुले आगोमा घीउ थप्ने काम गरेको बताएको छ । मोर्चाले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको विसंगतिका विरुद्ध यस अघि पनि चौध पटकसम्म अनसन बसिसकेका डा.केसीका जायज मागहरुलाई विना पूर्वाग्रह यथाशिघ्र सम्बोधन गरेर बिग्रदो स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल गर्दै उनको जीवन रक्षामा कुनै पनि लापर्वाही नगर्न चेतावनी समेत् दिएको छ ।
सरकारले अनसन बसिरहेका गोविन्द केसीलाई उल्टै ‘अधिनायकवादी’ को आरोप लगाएर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण पालेको विषयलाई लिएर विज्ञप्तिमा भनिएको छ।डा. केसी सँग वार्ता गरी जायज मागहरु पूरा गर्नुको सट्टा उल्टो अनसनकारीलाई नै ‘अधिनायकवादीको आरोप लगाउनुले यो सरकारको पूर्वाग्रही दृृष्टिकोण स्पस्ट देखिन्छ । यसबाट उनको जीवन रक्षामा थप खतरा पैदा हुँदै जाने संभावना बढेर गएको अवस्थामा हामी डा. के.सी.ले उठाएका जायज मागहरु पूरा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै, उनको जीवन रक्षामा कुनै पनि किसिमको लापरवाही नगर्न समेत् चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
तल भएको विज्ञप्ति पनि पढ्नुहाेस् ।